October 31, 2017 – AYA Bank
၂၀၁၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် (အင်္ဂါနေ့) ဧရာဝတီဘဏ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော် ၏ နှစ် (၅၀) ပြည့် ရွှေရတု မွေးနေ့ တစ်နေ့တာ
Posted on October 31, 2017 December 22, 2017 by Pyae Kyaw
မက်စ်မြန်မာ ဟိုးဒင်းကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ AYA Financial Group ဖြစ်သည့် ဧရာဝတီဘဏ်၊ ဧရာမြန်မာအာမခံ၊ AYA Trust Securities၊ Novotel Yangon Max Hotel တို့မှ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ၎င်း၏ မိသားစုသည် အများပြည်သုူအတွက် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ နှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် တိုင်းကျိုးပြည်ပြု လုပ်ငန်း များကို တာဝန်သိနိုင်ငံ့သားကောင်း တစ်ယောက်ပီပီ မိမိလုပ်ငန်းများဖြင့် မအားမလပ်သည့်ကြားမှ မရပ်မနားတတပ်တအား အမြဲကြိုးစားလုပ် ဆောင်နေသူ ဥက္ကဌနှင့်အတူ ကုသိုလ်ဖြစ် အလှူအတန်းများဖြင့် ဒါနပြုခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက် မိတ်ဆုံစားခြင်း ၊ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများဖြင့် ပျော်ရွှင်ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံနှတ်ဆက်ပြီး ဘောလုံးကစားပွဲကျင်းပခြင်း၊ ဘုရားဆီမီးပူဇော် ဝတ်ပြုခြင်း စသည့် အထူးအစီအစဉ်များဖြင့် မွေးနေ့မွေးနံကျသည့် ရွှေရတုမွေးနေ့ပွဲကို ပျော်ရွှင်စွာအတူတကွ ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။[…]
AYA's 7th Anniversary Blood Donation Ceremony
On 12 Aug 2017 (Sat), 300 of AYA Bank’s associates voluntarily and generously donated blood at the National Blood Center Yangon in celebration of the bank’s the7year anniversary. This is the annual occasion of the bank and its 7th time now. At the ceremony, on behalf of the Chairman of the bank, U[…]
AYA Bank participates in Myanmar Global Investment Forum 2017 asaLead Sponsor
AYA Bank encourages International best-practice for Myanmar’s Banking and Financial Sector Nay Pyi Taw, Myanmar, 14 September 2017: Azeem Azimuddin, Chief Financial Officer and Advisor to Chairman joined industry peers to share the bank’s vision and perspective on Myanmar’s competitive financial landscape at Myanmar Global Investment Forum 2017. During the event in Nay Pyi[…]
AYA Bank, AYA Myanmar Insurance and AYA Trust Securities Held 8th Annual Thadingyut Paying Respect Ceremony
On 10 Oct 2017 (Tues), the associates from AYA Bank, AYA Myanmar Insurance and AYA Trust Securities led by Chairman of AYA Financial Group, U Zaw Zaw, Wife Daw Htay Htay Khine , Senior Management Members paid homage and respect to the senior citizen board directors and senior citizen bank associates according to Myanmar traditional[…]
Posted on October 31, 2017 October 31, 2017 by Pyae Kyaw
ရင်သားကင်ဆာရောဂါ အန္တရာယ် အသိပညာပေးနှိုးဆော်သည့် အနေနှင့် ဘဏ်ရုံးချုပ် အဆောက်အအုံကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရင်သား ကင်ဆာရောဂါ အသိပေးအထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတ ပန်းရောင်မီးထွန်းညှိ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။ အများပြည်သူ၏ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတွင် စိတ်ချ ယုံကြည် ရသော ဧရာဝတီဘဏ်သည် Estée Lauder အလှကုန်ပစ္စည်းများ၏မြန်မာ ပြည်တစ်ဦးကိုယ်စားလှယ် Han Ideal Trading Ltd. နှင့် အတူ လက်တွဲ၍ ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ အသိအမှတ်ပြု ထားသည့် မြို့ပြအမွေအနှစ်ဖြစ်သည့် ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသော ဧရာဝတီဘဏ် ရုံးချုပ် အဆောက်အအုံအား ၂၀၁၇ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်မှစတင်၍ ပန်းရောင်မီးများနှင့် ထွန်းညှိစေခြင်းဖြင့် ရင်သားကင်ဆာရောဂါအန္တရာယ်ကို အသိပညာပေးနှိုးဆော် လိုက်သည်။ ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါ်မေမြတ်သူက၊ “ကျွန်မတို့ ဧရာဝတီဘဏ်၊ ဧရာ[…]
ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ ရခိုင်ဒေသပြန်လည် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း
၂၀၁၇ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၀)ရက်နေ့က နေပြည်တော်၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ အထောက်အပံ့ ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (UEHRD) အတွက် အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်မှ တက်ရောက်၍ အလှူငွေကျပ် သိန်း ၁၀,ဝ၀ဝ ကို ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ပေးအပ်သည့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်များအတွင်း ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ရာတွင် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသည့် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ကျပ် သိန်း ၁,ဝ၀ဝ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များ အတွင်း ဆုံးပါးခဲ့သူ နိုင်ငံ့သားကောင်းဝန်ထမ်းများအတွက် ၄င်းတို့၏ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများ၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသူများနှင့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအတွက် ကျပ်[…]
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဘဏ်ခွဲအသစ် ထပ်မံဖွင့်လှစ်
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် (၂၂၉)ဘဏ်မြောက် ဘဏ်ခွဲကို ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အထွေထွေဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူ အပေါင်းအား ဝမ်းမြောက်စွာ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ၂၂၉။ ကောလင်းဘဏ်ခွဲ ဦးပိုင်အမှတ်(၇၇)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၁၀)၊ (၅/ဘူတာရပ်)၊ ကျော်ဇေယျာရပ်ကွက်၊ ကောလင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ။ ဖုန်း ဝ၉-၄၀၃၃၄၅၅၆၀၊ ၄၀၃၃၄၅၅၆၁၊ ၄၀၃၃၄၅၅၆၂ Fax ဝ၇၅-၄၂၆၇၀၊ ၄၂၆၇၅ ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဖွင့်လှစ်ပြီးသော ဘဏ်ခွဲများကို AYA Website http://ayabank.com/contact/branches/ တို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
AYA Bank's 4th FY 2020-2021 Board of Directors' Meeting Held
AYA Bank ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေသွင်းခြင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ် စာရင်း အချင်းချင်း ငွေလွှဲခြင်း၊ဖုန်းခေါ်ဆိုစာရင်းပေးသွင်း၍ ငွေထုတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်သော ဘဏ်ခွဲစာရင်း
AYA Bank မှ Debit Card, ဘဏ်ကတ် အသစ်လျှောက်ထားခြင်း နှင့် ကတ် error ဖြစ်ခြင်း၊ AYA Mobile Banking / AYA Internet Banking အသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း (သို့) လော့ကျခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ရရှိနိုင်သော ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘဏ်ခွဲများစာရင်း
ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေထုတ်ယူခြင်း ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ရာ၌ ၂၀၂၁ခုနှစ် မေလ ၄ ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) မှ စတင်၍ 01 470 5555 သို့ ဆက်သွယ် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်
AYA Bank ရန်ကုန်မြို့ရှိ ငွေထုတ်ယူနိုင်သော ATM တည်နေရာများ
Events Select Month May 2021 April 2021 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 February 2019 January 2019 December 2018 October 2018 September 2018 August 2018 June 2018 March 2018 February 2018 December 2017 November 2017 October 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 April 2014 December 2013 September 2013 August 2013 June 2013 May 2013